१३ नम्बरलार्इ किन अशुभ मानिन्छ ? के भन्छ त विज्ञान ? हेर्नुहोस
एजेन्सी। मानिसहरुमा एउटा न एउटा अन्धविश्वसले जड गाडेको हुन्छ। दिन, बार,तिथि मिति र अंकमा समेत सुभ अशुभ छुट्टाएको हुन्छ । अधिकाशं मानिसहरू प्राय १३ अंकलाइ अशुभ मान्ने गर्छन् । साेहि कारण मानिसहरु यो अंकको प्रयोग गर्न अलि अन्कनाउने गर्छन । अझ पश्चिमी देशहरुमा १३ अंक प्रतिको विकर्षण र त्रासले आम मानिसमा जरो गाडेको पाइन्छ ।
१३ नम्बरप्रति यस्तो भय सिर्जना हुनमा धेरै घटना तथा संयोगहरु छन् । ती संयोगहरुले सिर्जना गरेकाे माहोलका कारण मानिसहरु यो संख्याप्रति नै डराउन बाध्य भए ।
मनोविज्ञहरुले १३ अंकप्रतिको डरलाई टि्रस्काइडेका फोबिया अर्थात् थर्टिन डिजिट फोबिया नाम दिए । डर यतिसम्म बढ्यो कि सोही कारण मानिसहरु १३ नम्बरको प्रयोगबाटै टाढा भाग्न थाले ।
उता भारतको सबैभन्दा व्यवस्थित मानिने चण्डीगढ सहरमा पनि १३ नम्बरको भूतले सताएको छ । पण्डित जवाहरलाल नेहरुको सपनाको उक्त सहरमा सेक्टर नम्बर १३ नै गायब छ । उक्त सहरको डिजाइन विदेशी नागरिकले गरेका थिए, जसलाई १३ नम्बरको फोबिया थियो ।
उता भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीको जिवनमा १३ नम्बरको निकै गहिरो सम्बन्ध तथा संयोग छ । प्रधानमन्त्री बन्ने तथा हट्ने धेरै कुराका निमित्त १३ तारेख तथा १३ दल आदिको संयोग पर्‍यो ।
अंक विज्ञान के भन्छ ?
अंक विज्ञान वा न्युमोरोलोजीको हिसाबले पनि १३ अंकलाई शुभ मानिँदैन । यसको मुख्य कारण १२ अंकलाई मानिन्छ ।
वास्तवमा न्यमोरोलोजीमा १२ नम्बरलाई पूर्णताको प्रतीक मानिन्छ । त्यसैले त्यो पूर्ण अंकमा १ जोड्नुलाई दुर्भाग्यको प्रतीक मान्ने गरिन्छ ।
तर कतिपय मानिसहरुको मत के छ भने १३ नम्बरलाई अशुभ भन्नु केवल अन्धविश्वास हो र यसको कुनै वैज्ञानिक प्रमाण छैन ।
भातको माडको अनगिन्ति उपयोगीबारे तपाइंलाई थाहा छ ? छैन भने पढ्नुहोस